Van Gaal: ''saxaafaddu wararka Mourinho iyagaa abuuray'' - BBC News Somali
Van Gaal: ''saxaafaddu wararka Mourinho iyagaa abuuray''
Image caption Taageerayaasha Man United ayaa dhawaan miijiyay taageerada ay u hayaan Jose Mourinho
Tababaraha Kooxda Manchester United Louis van Gaal ayaa si caro leh uga jawaabay wararka la isla dhex marayo ee shaqadiisa la xiriira, kaddib markii ay soo baxday in Jose Mourinho uu wadahadal la yeeshay kooxda.
BBC ayaa fahamsan in la qorsheeyay in tababarihii hore ee Chelsea, Mourinho uu xilka la wareegayo xagaagan.
Van Gaal oo 64 jir ah ayaa la waydiiyay Mustaqbalkiisa, wuxuuna sheegay inwarbaahintu ay abuurayso sheekada ku saabsan in la eryayo isla markaasna aan Man United looga baahnayn diidmada arrintaasi.
Van Gaal qandaraaskiisu wuxuu ku egyahay dhamaadka xili ciyaareedka soo socda.
Isaga oo hadlayay kaddib ciyaartii ay Chelsea la yeesheen ee barbaraha hal iyo halka ah ku dhamaatay Val Gaal ayay su'aalo kulul is waydaarsadeen weriyihii su'aalaha waydiinayay.
Van Gaal ayaa waydiiyay in wariyuhu uu la xiriiray Ed Woodward oo ah madaxa kooxda Manchester United iyo Glazers oo ah mulkiilayaasha si loogu sheego waxa socda.
Macalinka Layliya Man United wuxuu sheegay in loobaahanyahay in warbaahintu badalkii ay ku mashquuli lahaayeen mustaqbalkiisa ay ammaanaan hab ciyaareedkii kooxdiisa ee maalmihii u dambeeyay oo ay ku jirto midii ay barbaraha la galeen Chelsea.
Tababarahan horay u soo layliyay kooxaha Ajax, Barcelona iyo Bayern Munich Wuxuu sheegay in ciyaartaasi u dambaysay aysan ahayn mid lagu caajiso.
Wuxuu intaasi ku daray in Macalinkii waynaa ee Manchester United, Sir Alex Ferguson uusan wax koob ah qaadin saddexdii sano ee ugu horaysay isaga oo uga gol leh in mustaqbalka kooxdiisu uu hagaagidoono.